साङ्लाको पनि उपचार, सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा : RajdhaniDaily.com
Home रोचक साङ्लाको पनि उपचार, सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा
साङ्लाको पनि उपचार, सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा
बैंकक । साङ्लाले नसताएको घर कमै भेटिएला । अँध्यारा कुनाकाप्चामा लुकेका साङ्लाहरू विशेषगरी रातमा निस्कन मन पराउँछन् । त्यसो त दिउँसो पनि ननिस्कने होइन, निस्कन्छन् । यी साङ्लाहरू हामीले पकाएका खानेकुराभित्र बसेर हामीलाई हैरानै पार्ने गर्छन् । टेलिभिजन, रेफ्रिजेरेटरलगायतका विद्युत्तीय सामाग्रीभित्र पसेर तार टुटाएर काम नै नलाग्ने पनि बताउँछन् । बच्चाहरू पनि साङ्ला देखेर डराउँछन् ।
पशु चिकित्सक अचउनीले अचम्म मान्दै आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हिजो राति मैले जीवनमा कहिले पनि सोच्दै नसोचेको घटना भयो । एक जना बटुवाले सडकमा हिँडिरहेको बेला साङ्लोलाई कुल्चिएछन् । सडकमै हिँडिरहेका अर्का एक जना मनकारी मान्छेले त्यो देखे र सडकमा छटपटाइरहेको त्यो साङ्ला लिएर उनी उपचारका लागि पशु अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ल्याए । मलाई लाग्छ, यो घटना कुनै मजाक होइन ।’ यसले सबै जीवप्रतिको दया तथा लगावलाई दर्शाउँछ । सबैको जीवन अमूल्य छ । संसारमा यस्तै मानिस धेरैभन्दा धेरै होऊन् । दयाले संसारलाई सहयोग गर्दछ ।
वासिंगटन । कोरोना भाइरसविरुद्धको सबैभन्दा भरपर्दो उपचार मानिएको खोपका लागि विश्वका विभिन्न देशले पहल गरिरहेका बेला अमेरिकामा भने युवाहरुलाई आकर्षित गर्न एउटा विशेष प्रकारको...
बाँके । मेडिकल कलेज कोहलपुरमा आज एक व्यक्तिको कोभिड–१९का कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । अछाम चौरपाटी निवासी ५० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको...
प्रदेश एजेन्सी - March 5, 2020 0
एन्फामा टासी घलेको ‘रि इन्ट्री’
Not-to-be-missed एजेन्सी - June 20, 2020 0
काठमाडौं । मानार्थ अध्यक्षको रूपमा टासी घलेले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)मा तेस्रोपटक ‘रि इन्ट्री’ गरेको छ । शुक्रबार एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालगायत एन्फाका...
सर्लाहीको लालबन्दीमा एकैदिन २ कर्मचारीसहित २४ जनामा कोरोना पुष्टि
प्रदेश २ एजेन्सी - August 20, 2020 0
सर्लाही । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा आज (बिहिबार) एकै दिन २४ जना नयाँ कोरोना संक्रमितहरु थपिएको छ । हिजो (बुधबार) २ सय ३८ जनाको थ्रोट...
Breaking News एजेन्सी - February 12, 2021 0
Breaking News एजेन्सी - October 6, 2020 0
बिचार एजेन्सी - August 7, 2020 0
किन गएनन प्रधानमन्त्री ओली जनयुद्ध दिवस कार्यक्रममा ?
प्रदेश ३ एजेन्सी - February 13, 2020 0
काठमाडौं । आज फागुन १ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेको दिन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका...
प्रवास एजेन्सी - December 23, 2020 0
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले थाल्यो रुकुम घटनाको अनुसन्धान
प्रदेश ६ एजेन्सी - June 2, 2020 0
जाजरकोट । पाँच जनाको ज्यान जाने गरी पश्चिमरुकुमको सोतीमा भएको घटनाको स्थलगत अध्ययनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली जाजरकोट पुगेर छलफल थालेको छ ।...